တရုတ်နိုင်ငံစက်ရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်သမား များရဲ. ၉၀ % ကို စက်ရုပ်များဖြင့် အစားထိုး ပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တိုးမြှင့်ဟုသိရ | Buzzy
တရုတ်နိုင်ငံစက်ရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်သမား များရဲ. ၉၀ % ကို စက်ရုပ်များဖြင့် အစားထိုး ပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တိုးမြှင့်ဟုသိရ
အနာဂတ်မှာ စက်ရုပ်တွေဟာ လူသားတွေထက် ပိုပြီးတော့ စွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မည်လို့ ခန့်မှန်းထား
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ Changying Precision Technology Company က အလုပ်သမား ၅၉၀ နေရာကို စက်ရုပ်တွေ
နဲ့ အစားထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်သမားအရေအတွက် ဟာ စက်ရုံရဲ. ၉၀% ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတျနိုငျငံမှာ ရှိတဲ့ Changying Precision Technology Company က အလုပျသမား ၅၉၀ နရောကို စကျရုပျတှေ
နဲ့ အစားထိုးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။အဲ့ဒီအလုပျသမားအရအေတှကျ ဟာ စကျရုံရဲ. ၉၀% ဖွဈပါတယျ။
စက်ရုပ်များဖြင့် အလုပ်လုပ်နေသည့် စက်ရုံ ရဲ. နေရာ တစ်ခု အားပြသသည့်ဓာတ်ပုံ
လက်ရှိ Changying Precision Technology Company ဟာ mobile phones ထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ စက်ရုပ်တွေကို အစားထိုးအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပေါ်လာတဲ့အကျိုး အမြတ်တွေကတော့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး အပျက်အစီးများကိုလည်း ယခင် ၂၅% မှ ယခု ၅% အထိလျော့ ကျစေတယ်လို. ဆိုပါတယ်။
လကျရှိ Changying Precision Technology Company ဟာ mobile phones ထုတျလုပျတဲ့ နရောမှာ စကျရုပျတှကေို အစားထိုးအသုံးပွုခဲ့တာပွဈပါတယျ။ထှကျပျေါလာတဲ့အကြိုး အအမွတျတှကေတော့ ကုနျကစြရိတျသကျသာပွီး အပကျြအစီးမြားကိုလညျး ယခငျ ၂၅% မှ ယခု ၅% အထိလြော့ ကစြတေယျလို. ဆိုပါတယျ။
ယခုလို စက်ရုပ်တွေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာ အစားထိုးအသုံးပြု လာတာဟာဆိုရင် ယခင်နှစ်များကလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ စက်ရုံ တော်တော်များများဟာ စက်ရုပ်တွေ ကို အသုံးပြုနေပြီဆိုတာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်း သိရှိခဲ့ရပြီး
ယခုလို စကျရုပျတှနေဲ့ လုပျငနျးခှငျတှထေဲမှာ အစားထိုးအသုံးပွု လာတာဟာဆိုရငျ ယခငျနှဈမြားကလညျးရှိခဲ့ပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံ စကျရုံ တျောတျောမြားမြားဟာ စကျရုပျတှေ ကို အသုံးပွုနပွေီဆိုတာ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈတှကေတညျး သိရှိခဲ့ရပွီး